Qareenka Cannabis -Tom Howard - Qareen Ganacsi | Marijuana Iyo Hemp
Noqo Ku-Xigeen / Soo-gal
Shuruucda Marijuana ee Florida
Qorshaynta isticmaalka xashiishka ee Illinois & qorshaynta isticmaalka dhulka
Kharashka lagu furayo Dhismaha Dispensary & Fresh Grow
Xashiishadda Xashiishadda Xashiishadda
Korodhso Ganacsigaaga Xashiishadda Sharciyeed
Sharci-dejinta Marijuana waxay keenaysaa fursado ganacsi. U qorshee kulankaaga istaraatiijiyadda qareenka cannabis, Thomas Howard, hadda si aad u hesho:
→ Tilmaamaha Ku-Dhaqanka Xashiishka
Ights Fahamka gorgortanka
Iibso / Iibso xulashooyinka ganacsiga
Hel Kalfadhiga Hada
Jaranjarooyinka aad qorsheyneyso inaad gasho? *
Horumarka hemp Qaybinta Shaybaarka Tijaabada Dukaanka tafaariiqda Gaarsiinta tafaariiqda warshadaha Ancillary kale
Kheyraadka Khadka Tooska ah ee Warshadaha Xashiiska
Tom wuxuu kaga jawaabayaa su'aalahaaga warshadaha xashiishadda maqaalo iyo fiidiyowyo cusub oo aad ka raadin karto hoosta. Marka noo sheeg su'aashaada warshadaha xashiishka.
Sharciga Xashiishad waa aag aad u cusub oo lagu dhaqmo, laakiin tan iyo sanadkii 2010, qareenka marijuana Thomas Howard wuxuu cilmi baaris iyo qoraal ku sameynayay sharciyada cannabis ee federaalka iyo gobolka. Kala soco warbaahinta bulshada adoo rukhsad u siinaya Cannabis Sharciyeynta Wararka Podcast.
Qareennada Xashiishadda ee leh Asal Ganacsi
Thomas Howard wuxuu ku qaatay tobankii sano ee ugu horreeyay qareen isagoo noqonaya ruqsad dillaal saamile (Liisanka taxanaha 7 & 66) ka dibna wakiil ka ah hay'adaha maaliyadeed ee ku saabsan macaamil ganacsi lacageed sugan iyo hawlgallo ganacsi.
Ka wac xafiisyada sharciga xashiishadda maanta si loogu helo Istaraatiijiyadda Istaraatiijiyadeed si lagaaga caawiyo wax ka mid ah arrimaha soo socda ee ganacsiga cannabis:
u hogaansanaanta sharciga gobolka
U hogaansanaanta HIPAA
Liisanka sharciga gobolka
Iibka & suuq geynta dijitaalka ah
Ku Dhaqanka Xannaanada Cannabis Tan iyo sanadkii 2010
Ka dib sanado badan oo cilmi baaris iyo daabacaad ah oo ku saabsan sharciyada marijuana ee federaalka, arrimaha ganacsiga gobolka iyo kuwa maxalliga ah ee ganacsiga xashiishka ayaa loo baahan yahay annaga shirkadda sharciga I caawi. Maanta, CBD iyo Hemp Waxay ku biireen beerta ganacsiga ganacsigana xashiishadda ayaa ku faafay waddanka oo dhan.
Tom wuxuu ka caawiyey kooxda Cannabis Mergers Group inay ka hormarsadaan hirarka kadib markii liisanka la dhiibo.
Gobollada qaar ayaa runtii oggol calaamadaha ganacsiga, laakiin sharciga federaalka ayaa weli ah mid murug leh marka loo eego CSA.
Kirooyinka, xiritaanka, daymaha makaanikada, amaahda dhismaha, macaamil ganacsi cannabis.
Codsiyada laysanka xashiishka waa kuwo adag oo ay ka buuxsameen qawaaniin si dhab ah qayb uga noqonaya liisanka marijuana mar la gudoonsiiyey. Waan caawin karnaa.
Intii lagu jiray waqtigiisa firaaqada ah dhowrkiisii ​​sano ee ugu horreeyay ee barashada sharciga, Tom Howard wuxuu cilmi baaris ku sameeyay taariikhda iyo sharciga kiiska ee ku saabsan ansaxnimada shuruucda marijuana ee qaranka.
Sharciga Cannabis waa aag aad u cusub oo lagu dhaqmo, laakiin laga soo bilaabo 2010, qareenka marijuana Thomas Howard wuxuu baarayaa oo qorayaa shuruucda federaalka iyo gobolka. Kala soco warbaahinta bulshada.
Kulan Istaraatiijiyadeed oo qiimo leh
Qareennada Cannabis oo leh Aasaasiyad Ganacsi
Thomas Howard wuxuu ku qaatay tobankii sano ee ugu horreeyay qareen isagoo noqonaya ruqsad dillaal saamile (Liisanka taxanaha 7 & 66) ka dibna wakiil uga noqda hay'adaha maaliyadeed ee macaamil ganacsi lacageed.
Maanta u wac xafiiskeenna sharciga si kulankaaga Istaraatiijiyadeed looga caawiyo mid ka mid ah arrimaha soo socda ee ganacsiga cannabis:
Boggeena Sharciga Xashiishka
Caawinta sharciyeynta marijuana ilaa 2010 - halkan ka eeg qalabkayaga cusub.
Ruqsadda Soosaarida Xashiishadda Caafimaadka ee Georgia
Liisanka Waxsoosaarka Xashiishadda Caafimaadka ee Georgia Georgia waxay aqbashay codsiyada Shatiyada wax soo saarka xashiishadda caafimaadka. Ka dib markii gobolku u oggolaaday isticmaalka marijuana caafimaad 2015, Golaha Guud wuxuu ugu dambeyntii meel mariyey biil u oggolaanaya soo saarista iyo iibinta marijuana ...
Maxkamadda Caddaaladda ee Yurub ayaa xukunta CBD ma aha narkotiiko
Maxkamadda Caddaaladda ee Yurub waxay Xukuntaa CBD ma aha Maxkamadda Yurub ee Caddaaladda Sharciyada CBD ma aha narkotiiko, waxay furaysaa daaqad cusub oo dib u habeyn lagu sameynayo xeerarka CBD ee Faransiiska iyo Yurub oo dhan waxayna ku qasbi kartaa maamulayaasha kale ee qaranka inay dib u eegaan xayiraadaha jira ...
Miyaad Calaamadeyn Kartaa Nooca Cannabis?
Miyaad Calaamadeyn Kartaa Nooca Cannabis? Sida ganacsi kasta oo kale, warshadaha xashiishadda ayaa aad u ilaaliya wax soo saarkooda iyo adeegyadooda. Dareenkaan, waxay ahaan laheyd fikrad fiican inaad isku daydo inaad ilaaliso xuquuqdaada Hantida Caqliyeed ee ku saabsan ganacsigaaga xashiishka. Laakiin waa ...
Akhri Warar Dheeraad ah
Inta lagu gudajiray sannadihiisii ​​ugu horreeyay ee uu ku dhaqmo sharciga, Qareenka Xashiishad, Tom Howard waxay cilmi baaris ku sameysay taariikhda iyo sharciga quseeya asalka iyo ansaxnimada shuruucda marijuana umadda. Wuxuu daabacay khayaaliga taariikhiga ah ee ka dhashay cilmi baarista hoosta ereyadiisa curyaaminta ah, Hoam Rogh. Wuxuu hore u daabacay laba buug oo kale oo uu qoray muddadii uu ku sugnaa dugsiga sharciga.
2018, wuxuu dhisay degelkan wuxuuna bilaabay a YouTube channel taas ayaa si xawli ah u koraysa. Arbaco kasta markay tahay 2:00 pm CST, Tom wuxuu soo dhaweynayaa dadka ka socda ganacsiyada dhammaan warshadaha xashiishadda si ay uga hadlaan wararkii ugu dambeeyay ee sharciyeynta xashiishadda. Isku qor maanta oo daawo sharciyada isbeddelaya toddobaadba usbuuc. Tusaalaha tusaalaha ah ayaa kujira bogga, iska hubi.
Hadafka Qareenka Warshadaha Cannabis
Si loogu gudbiyo warshadaha awooda buuxda ee geedka xashiishka - kaliya ma ahan marijuana, ama hemp CBD, laakiin waa in la adeegsadaa dhammaan codsiyada badeecada cusub ee ugu horreysa qarniga 21aad.
Qareenka Cannabis, Thomas Howard, wuxuu cadeeyay websaydhka uu la dhisay Stumari inuu soo bandhigi doono waxyaabaha laxiriira fulinta howsha.
Qareenada Ganacsi ee Xashiishka
Waxaan halkaan u joognaa inaan ka caawino ciyaartooyda xashiishadda inay koraan oo ay ilaaliyaan shirkadaha aasaasayaasha warshadaha ay u hanteen inay abuuraan.
Dhammaan macluumaadka halkan ku qoran waxaa loogu talagalay ujeedo waxbarasho oo keliya mana jiro xiriir qareen iyo macaamil la abuuri karo haddii aan laga helin warqad kaqeybgal ah oo laga helayo bannaanka.
Sabti & Axad: Wuu xidhan yahay
Warka Warshadaha Cannabis
Isdiiwaan geli oo hel wixii ugu dambeeyay ee ku saabsan warshadaha xashiishadda. Waxaa ku jira waxyaabo gaar ah oo keliya oo lala wadaago macaamiisha.